၂၁ ကြိမ်မြောက် ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော် – Screening Times | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ၂၁ ကြိမ်မြောက် ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော် – Screening Times
၂၁ ကြိမ်မြောက် ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော် – Screening Times
Posted by kalink on Oct 2, 2012 in Entertainment, Movies/TV, News |4comments
ရုပ်ရှင်ကြိုက်တဲ့ ရွာသားတွေ ပျော်ရအောင် အလကားကြည့်လို့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သတင်းလေးကို မြန်မာနက်ဝက်က ဖတ်ရလို့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
၁ ကြိမ်မြောက်ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေဘုရားလမ်းရှိ နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံတွင် ကျင်းပသွားပါမည်။
အထူးသတိပြုရန် – ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ဖိတ်စာပါရှိရန် မလိုအပ်ပါ။ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်များကိုပွဲမစမီ ၁၅ မိနစ်အထိ ဦးရာလူစနစ်ဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
6:30 pm Germany Almanya – Welcome in Germany
3:30 pm Switzerland Vitus
6:30 pm France Joueuse (Queen to Play)
3:30 pm Germany Almanya – Welcome in Germany
6:30 pm Norway The Kautokeino Rebellion
3:30 pm Great Britain The Iron Lady
6:30 pm Switzerland Vitus
3:30 pm Switzerland Die Herbstzeitlosen (Late Bloomers)
6:30 pm Finland Mother of Mine
3:30 pm France Joueuse (Queen to Play)
6:30 pm Great Britain The Iron Lady
3:30 pm Germany Das System (The System)
6:30 pm France Une vie de chat (A Cat in Paris)
3:30 pm Great Britain Wuthering Heights
6:30 pm Switzerland Die Herbstzeitlosen (Late Bloomers)
6:30 pm Germany Das System (The System)
3:30 pm Norway The Kautokeino Rebellion
6:30 pm Great Britain Wuthering Heights
3:30 pm France Une vie de chat (A Cat in Paris)
Read more: ၂၁ ကြိမ်မြောက် ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော် – Screening Times – Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topics/screening-times#ixzz28EeJE8Ji
အလကား ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ စိတ်တော့ဝင်စားသားး…
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က …သံရုံးက လက်မှတ်ရလို့ …. အားနာပါးနာနဲ့ ကျွန်မ သွားကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ် … ။
ထင်ထားသလို ခေတ်ပေါ်ကား မဟုတ်ဘူးပဲ …. ၊ ခေတ်နောက်ကျနေတာတောင် အတော်လေး ဟောင်းနေပြီလို့ပြောလို့ရမယ် … သူတို့ကတော့ ၊ ရေခံ၊မြေခံ သမိုင်းကြောင်း နောက်ခံထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပြပေမယ့် … ကြည့်ရတဲ့ လူက အခုထွက်နေတဲ့ ကားတချို့နဲ့ နှိုင်းပြီး … ကြည့်ရင်း ပျင်းလာတယ် … ။ ဒါနဲ့ ပဲ .. ပွဲ မပြီးခင် ရုံက ပြန်တယ် … ။ အဲ့ဒီမှာ စတွေ့တာပဲ … စစ်လား ဆေးလားပေါ့ … ။ မပုတင်တို့ … အကြောင်းရာတို့ ပြပြီး … ပွဲမပြီးခင်ပြန်တာ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်လေ …. ။
ဘလိုင်းကြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတော့ ဒီကလည်း .. ဘယ်ထိုးပါ့မလဲ …. ။ ဒါနဲ့ပဲ … အတူသွားတဲ့ လူတွေထဲက တစ်ယောက်က ၀န်ထမ်းကဒ်ပြပြီး ဌာနပြောတော့မှ …အားလုံးပြန်ခွင့်ရခဲ့တယ် … ။ ဟီး ဟီး .. မလွယ်ဘူးပဲ :harr:
ကိုယ့်ဒေသရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုစရိုက်လေးတွေရှိသလို….သူတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့လေးတွေလဲ…လေးလေးနက်နက်ပြတတ်လို့…. အကြောင်းအရာတွေကတော့ လေးတယ်… အလကားကြည့်ရလို့ ပျင်းစရာကောင်းတာနေမှာပါ….. တကယ်တော့ သူတို့ပြတဲ့ကားတွေက အပြင်မှာ ၀ယ်လို့မရပါဘူး..
အယ်လ်အေမှာလည်း မြန်မာရုပ်ရှင်ပွဲတော် လုပ်မှာပါ…
၅နှစ် ..၅ကြိမ်တိုင်ခဲ့ပြီလေ… အောင်တိုဘာ ၇ ရက်နေ့ပါ..။
၀င်ကြေးမရှိ.. မုန့်စားရေသောက်အခမဲ့နှင့် ကြွရောက်ကြပါရန်…